Kicheni Makabati Ruvara Kusanganisa - Kitchen Cabinets Color Combination
Home Kicheni Makabati Ruvara Kusanganisa
Iyo Kicheni ndiyo yakakosha pfungwa yekubatanidza mumba mako; zvese zvekugutsikana kwako pamwe nekutengesa. Saka kutora chaicho chakakomberedza kabhodhi yako yemukombe ndiko kwakakosha. Vazhinji vari kugadzirisa zvekare kana vakasarudza mapurani epasi ayo anosanganisa mukicheni munzvimbo yakajairika, uye kazhinji hapana kicheni / yekudyara / matunhu enzvimbo. Kuita bureau shading sarudzo yakakosha chikamu mukuisa iyo mamiriro epfungwa uye kuita kunakidzwa mune yako yakakosha yekugara nzvimbo. Iva izvo sezvazvingave, kusarudza iyo yakakodzera shading yekicheni yako kwakaomesesa kupfuura kungafungirwa. Izvi zvinogara zvichirovera varidzi vezvivakwa kusarudza iyo Vanilla.
Nei Uchifanira Kufunga nezvekushandisa Asiri-nonpartisan Colour Yako Makabati
Vanowanzogara vakabata mari vanozeza kufunga kunze kwematongerwo enyika (Ini ndichazonyora bhurogwa gare gare pane iyo nzira inoshanda kwazvo yekusarudza isinganzwisisike yekicheni mukombe kabhodhi shading) sezvo ivo vachityisa zvinogona kukanganisa kushambadzira zvakare kumashure. Ivo vanonyanya kushushikana nekicheni mukombe kabhodhi hues nekuda kwekukosha kwekicheni isingawanzo kutengesa imba. Chokwadi, iyo kicheni ndiyo fungidziro huru kune vatengi.
Vatengesi vanogara vachifungidzira kuti pamukana mukana wekuti ivo vagadzire imba yavo zvakawandisa vachiita kuti kuve nekuwedzera kufarira iko. Kujaira kufunga kunogona kuita kuti vanhu vanonyanya kutenga vatenge mutengo unodhura mutengesi awane. Chero zvazvingaitika, zvinoregedza kufunga huwandu hwemipiro inowanikwa mumusika uchishandisa iyi yakafanana nzira inopararira yakavakirwa. Chokwadi chechinhu ndechekuti kuenda kusingafungidzike kunoreva kuti kunyangwe paine mukana wakawandisa wevanogona kutenga vatengi kuchave nekuwedzera sarudzo dzakafanana.
Chimiro chikuru chirongwa chikuru; uye kuyeuka kuti dzakasiyana siyana dzinogadzirisa vashoma ivo vanhu zvinogadzirisa vanhu avo pane yakanyanya kukosha. Iwe pachako uchave nemukana wekukwira mukupesana nesarudzo chero dzipi muuropi hwevanhu avo; uye ndiyo nzira yaunotengesa nayo imba yako kuti uwedzere.
Chii chinonyanya kukosha ndechekuti iwe unokoshesa kicheni yako saka sarudza shading uye inopedzisa iyo inokusimbisa. Gadzirira kuita izvo vamwe zvisiri chaizvo. Mativi ese anofanirwa kufambira mberi munzira yakatarisana nechinangwa chakasimba chechimiro. Chimiro chakakura chakabatanidzwa mukati nekubuda pane rimwe ruoko, kutyaira nzira, uye kurova mukuda kwako kwechimwe chako chimiro.
Pfungwa dzinonakidza Kana uchisarudza Ruvara rweKitchen Makabati
Muzviitiko zvakawanda isu tinotaura kuti iyo “imba inosarudza shading” uye huru shading sarudzo iri kuwedzera nezve shading kurasa, mune chero chiitiko kana kutanga kutanga maitiro.
Tarisa uone zvinhu zvisingazoshandurwe. Zvichida iwe unokoshesa zvirairo zvako zviripo / kusaswa kumashure uye nemidziyo yekupinda kana uine zvimwe zvekugadzira matombo kana zvidhinha mumba yekubatanidza. Iwe unofanirwa kusarudza shading inoenderana neiyi shanduko isina kuisa. Iwe unofanirwa kuziva nezve maitiro ayo iwo iwo mwenje uri mukamuri uchave nawo pane mumvuri wevakamukana. Iwo hunhu hunhu here?
Radiant? Fluorescent? Musanganiswa wevaviri? Kuvhenekera kuchapesvedzera kuti mumvuri unoratidzika sei, uye kutaridzika kuchachinjawo kwenguva yekuswera nemasikati sekusanganiswa kwekuchinja kwemwenje.
Ramba uchiita semuenzaniso nzira yekupinda iwe kuti ikupe yakakura yehunyanzvi kesi yekumiswa.
Panguva ino iwe unogona kunge wakanzwisisa kuti imwe yenzira dzakanyanya kusarudzika dzekushandura zvakanyanya kicheni yako (uye kubva kune akasiyana maonero imba yako) pamutengo unonzwisisika ndiko kupenda makabati ako emukicheni. Izvo zvaive zvakasarudzika kutenderedza makore gumi zvisati zvaitika kuti maple uye oak akaumbiridzwa mukombe ndiwo aive anyatso kuzivikanwa sarudzo zvisinei pendi yemabhodhoro yakakurumidza kutendeuka kuita chiyero.
Isu tinotangazve chikamu chikuru chemakabati emukicheni (uye eshawa makapu, uye zvichingodaro) muCleveland, OH zone uye imwe yemibvunzo inozivikanwa inozivikanwa yatinowana ndicho chinhu chinodzikisira kusarudza. Hechino chikamu chemhando dzakasarudzika (ese kubva kune redu basa) padhuze nekujekeswa kuti ugone kusarudza icho chakanakira imba yako. Kana iwe usinga funge kuramba uchirangarira, kana uchinhonga chero pendi kupukutika kuti huwandu hwakawanda hwesimba mukamuri hunochinja zvinoratidzika zvakanaka. Imwe shading ingaratidzika inoshamisa mukicheni yemumwe munhu asi isiri yako.
White Kitchen Makabati
Ichena ichiri yakanyanya kuzivikanwa shading sezvazvakaita mune chero chiitiko makore mashanu kana imwe nzvimbo iri pedyo. Chimwe chikonzero chena chakaita shading yekumusoro iri pamisango zvekuti inoita huwandu hwakawanda hweiyi hukadzi mukicheni pop, (semuenzaniso, madzviti nematafura). Ichena akapetwa makapu anogona kukonzeresa kicheni kadiki kuti ioneke yakakura sekupenda vapatsanuri shading yakajeka inogona kuita.
Greyish / Kirimu Yakavezwa Makabati
Yechipiri inonyanya kufarirwa Bureau shading ndeye grey kana kirimu. Mudzimba dzakawanda kuwanda kwakachena kuchena pamakadhibhokisi ekicheni kunogona kuve kwakawandisa. Aya ndiwo mamiriro ezvinhu nguva dzose kana chikamu chakasara chetime mumba chiri grey kana kuti zviyero kana nzvimbo yepasi mukicheni iri padivi rinodziya renji. Semuenzaniso, mune chiitiko icho makomuru ako ane toni yematani akasviba kana yero toni, panguva iyoyo shasha yegrey inogona kuva rumbidzo inoshamisa.
Iyo mimvuri inoshanda zvinoyemura (uye inotaridzika kupenya) mukicheni iyi nekuda kwemahisi akasiyana. Sezvo vakakamuriwa vari mumvuri wakasvibirira uye kumashure kwavo kune toni yematoni akasviba, iyi grey shading inovakurudzira zvakanaka.
Kupenda Kicheni Makabati Grey
Dim ndiyo inonyanyo kuzivikanwa mhuri yemumvuri weti inogovanisa shading, zvisinei ndeye iyo yakanakisa shading kune yako yekicheni makabati? Zvirokwazvo ichi chisarudzo chakakurumbira hazvo asi zvimwe chingangoita ‘mukurumbira’ pane chena uye grey. Saizvozvowo seyine chero shading inovimba zvechokwadi pane yakasara yekushongedza kwako senge pasi uye nemahara. Chiedza chisina kusviba uye chakasviba rima chine mbiri pamakapu Chimiro chisina kusimba chinogona kupinza zvakanyanya pane chete kapu yemikombe, semuenzaniso, kupenda chitsuwa kana kungoita makapu epasi makabati anotenderera.
Bhuruu Pendi Kicheni Makabati
Muchiitiko icho iwe chave zvino chiine dhiragi uye chena mukicheni yako, chimwe chinoshamisa chekuti upende makapu ako anogona kunge ari dombo rehondo rebhuruu. Izvi zvinogona kushandiswa zvakanyanya pane chimwe chikamu chemakombe pane pane imwe neimwe yetinogona kuva inonakidza kusimbisa uye pfungwa yekusangana. Izvi zvisinganzwisisike kwete zvemunhu wese uye hazvifanirwe kuve zvichizivikanwa mumakore mashanu kana zvakadaro zvakadaro panguva iripo (muna 2018) iyi ndeyechokwadi yakasarudzika nzira.
Green Colors yeKitchen Makabati
Imwe yekupedzisira shading sarudzo kuratidza mumvuri wegirini. Kufanana neuto rehondo reruvara rwebhuruu, iyi sarudzo inowedzera yakasarudzika inoshanda yega mumisha. Iyi shading inogona kushanda mudzimba nemhando dzese dzinodziya, semuenzaniso, mumvuri we beige. Uye nekuwedzera kazhinji inogona kushanda zvakanyanya neanopfeka echena grey pane inoonekera chena.
Zvakakodzera chinyorwa ichi chinokuita kuti iwe ugadzire kicheni yako kabhodhi pendi venture. Iko kune tani yezvimwe zvinoshamisa dzimwe nzira dzinowanikwa uye yakanakisa kwauri iwe inotsamira pane zvako kuravira uye dzakasiyana hues mukicheni yako. Muchiitiko icho iwe unogara muCleveland zone, isu tinoda mukana wekutaura newe nezve pendi yemukombe wekapu yako. Iwe unogona kujairana nemafambisirwo edu pane yedu Kabhurari Paira peji.